Inqwelomoya yokulwa yaseBritani iRAF F-35 yantlitheka kuLwandle lweMeditera
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » Inqwelomoya yokulwa yaseBritani iRAF F-35 yantlitheka kuLwandle lweMeditera
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Inqwelomoya yokulwa yaseBritani iRAF F-35 yantlitheka kuLwandle lweMeditera.
U-HMS uKumkanikazi u-Elizabeth – ophethe iinqwelo-moya ze-Flegship yase-UK – wayenee-F-35 zase-UK ezisibhozo ebhodini, kunye nee-F-10 zaseMelika ezili-35. Kutshanje ibuyele eYurophu emva kokuchitha ngaphezulu kweenyanga ezisixhenxe kuhambo lwayo lokuqala ukutyhubela uLwandle lwaseTshayina ukuya kwingingqi ye-Indo-Pacific.
Inqwelomoya yokulwa yase-UK iRoyal Air Force F-35 iye yawela kuLwandle lweMeditera kwangoko namhlanje.
Umqhubi wenqwelo-moya wahlangulwa ngokukhuselekileyo waza wabuyela kumphathi wenqwelo-moya.
Kwangoko ngoNovemba, i-UK yathatha abaqhubi abathathu be-F-35 abanobuqili, ngexabiso le-£ 100 yezigidi (i-135 yezigidi zeedola) nganye.
BaseBrithani UMphathiswa wezoKhuselo (MoD) ikhuphe ingxelo, ibhengeza ukuba iRoyal Air Force (RAF) F-35 yokulwa inqwelomoya iye yantlitheka elwandle. ulwandle lasemediterranean namhlanje. Umqhubi wejethi ukwazile ukuphuma ngokukhuselekileyo kwinqwelo-moya phambi kwengozi.
Umqhubi wenqwelo-moya uye wahlangulwa ngokukhuselekileyo wabuyela kumphathi wenqwelo-moya kwaye uphando luye lwaqaliswa ngesi siganeko.
Ngokutsho MoD Ingxelo, "umqhubi wenqwelomoya waseBritane we-F-35 ovela kwi-HMS uKumkanikazi u-Elizabeth ukhutshiwe ngexesha lemisebenzi yokubhabha IMeditera namhlanje ekuseni."
“Ayizukufaneleka ukuphawula ngakumbi ngeli xesha,” utshilo ntsimini wongezwa.
Ingozi yanamhlanje ye-F-35 sisiganeko sokuqala esixelwe kumphathi wenqwelomoya e-UK, i-HMS Queen Elizabeth.
Kwangoko ngoNovemba, i-UK yathatha amajoni amathathu e-F-35 e-stealth, ngexabiso le-£ 100 yezigidi (i-135 yezigidi zeedola) lilinye, lizisa inani elipheleleyo kwiinqanawa zelizwe kwi-24.
Urhulumente wase-Bhritane uyalele ezinye iijethi ezintandathu, eziza kufika kulo nyaka uzayo, kunye nezisixhenxe eziza kufika ngo-2023, ngenjongo yokuba zibe nee-F-48 ezisebenzayo ezingama-35 ngo-2025.
Isebe lezoKhuselo alikayifumani inqwelomoya, ekukholelwa ukuba iye yantlitheka elwandle ngentsimbi yeshumi kusasa ngolwesithathu, kwaye akukho nenye inqwelomoya ebandakanyekayo kwesi sehlo.
Ngaphandle kokuqaliswa kophando, zonke ii-F-35 eziseleyo kunye neenqwelomoya zoqeqesho ziyaqhubeka ngaphandle kokuphazamiseka.